सम्झनाको तरेलिमा कामरेड हेम प्रसाद पुन - Supadeuralionline::सुपादेउराली अनलाइन
सम्झनाको तरेलिमा कामरेड हेम प्रसाद पुन
आदरणीय स्वा. का हेम प्रसाद पुन असाध्यै सरल, मेहनति स्वाभाव का ब्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । बाबा ईन्द बहादुर पुन र अामा भद्रकलीकाे जेठाे सुपुत्र का रुपमा का हेम प्रसादकाे पुनकाे जन्म वि.स २0२९ साल वैशाख १४ गते शनिबार काे दिन गल्काेट न .पा ११ सानाे रिघामा किसान परिवार मा भएकाे हाे।
उहाकाे परिवारमा ६ दिदिबहिनी र २ भाई हुनुहुन्छ । उहा लामाे समय राजनीतिक रुपमा ने .क. पा (मसाल) मा अावध्द भई मसाल काे सहायक संगठन अखिल नेपाल युवक संघ काे महामन्त्री काे रुपमा पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुुुभएको थियाे।
पछिल्लो समयमा उहाले जनजाति सम्मेलनकाे महासचिव काे रुपमा जिम्मेवारी निर्वाहा गर्दै अाउनु भएकाे थियाे। उहा पार्टी मा अत्यन्त जुझारु सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । मैले चिनेकाे हेम प्रसाद पुन म सानै बच्चा हुदा कक्षा ३ मा पढ्दै थिए। त्यस समय उहा पनि अाफनै गाउँकाे विधालय सानाे रिघा नि .मा.वि मा केहि समयका लागि हामीलाई पढाउन अाउनु भएकाे थियाे। उहाकाे त्याे नै शिक्षककाे रुपमा उपस्थित मेराे लागि अाैपचारिक चिन्ने अवसर पाप्त भएकाे थियाे। उहाकाे अत्यन्त सरल र गहन तरिकाकाे प्रस्तुतिले नै पहिलाे दिन मै अाकषित भएकाे थिए। अन्य सरहरुकाे स्वाभाव भन्दा उहाकाे स्वाभाव मलाई फरक लाग्ने गर्दथ्याे । उहाँमा रिसाउने स्वाभाव मलाई केहि समय पढाउदा पनि मैले देखिन् । केहि समय पढाए पछि उहा विधालय अाउनु भएन्। अनि मलाई उहाँको बारेमा जान्ने ईच्छा जाग्याे किनभने उहाकाे पढाउने तरिका उहाकाे ब्यावहारले मलाई मनमा नया तरङ्ग पैदा गत्याे। जब म अामालाई साेध्ने गर्थे हेम प्रसाद सरले के गर्नु हुन्छ उहाँ भन्नु हुन्थ्यो ।
पार्टी को नेता त्यहि भएर उहाँ पार्टीकाे कामले नै बाहिर बस्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । प्राय उहाँ गाउँमा अाउदा हाम्रो घरतिर पनि अाउनुहुन्थ्याे ।उहाँले हजुरबुबा , बाबा , अामा संग पनि सरल, सहज तरिकाले सामान्य कुरा गर्नुहुन्थ्यो । गाई गाेठालाे जाने त्रममा अक्सर म उहासित नै जाने गर्थे । उहाँको हातमा सधैं पुस्तक हुन्थ्यो ,उहा असाध्यै अध्यनशिल ब्याक्क्ति हुनुहुन्थ्यो । म ति वाक्ला पुस्तक पढेको उहाँलाई देख्दथे उहाँले पनि मलाई पढाउने गर्नुहुन्थ्यो । साथै राम्रो सँग पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई भन्नुहुन्थ्यो उहाँ प्राय गाउँमा अाउदा सबै संग सामाजिक ,राजनीतिक छलफलमा कुराकानि गरेकाे पाउथे।
लामाे समय देखि देशमा ने. क.पा (माअाेवादि) ले जनयुद्ध सञ्चालन गरेकाे थियौं । गाउँ घरमा माओवादी पक्षबाट नेकपा (मसाल) का नेता कार्यकर्ता सिध्याउने रणनीति राखेकाे थियाे भने गाउँलेहरुलाई जवरजस्ति चन्दा अाटंक मच्चाएको थियाे । त्यसका विरुद्ध निर्मम प्रकारले त्याे ज्याजतिका विरुद्ध उहाँले प्रतिकार गर्नु भएकाे थियाे । उहाँ बम गाेला संग हिडेका ब्याक्क्तिहरु संग पनि उहाँ याे अन्यन्त गलत तरिका भएकाे साथै याे अान्दोलनले जनतालाई दुख दिनुका साथै जनताको जिबन स्तरमा कुनै परिवर्तन नअाउने सयौं गरिब का छाेराछाेरिहरु काे रगत त्यसै खेरा जाने कुरा बताउनु भएकाे थियौ । याे तरिकाले केहि मानिसहरु राज्यसत्तामा जाने तर सर्बहारा बर्ग को राज्यसत्ता स्थापना नहुने कुरा उहाँले माअाेबादि का नेता कार्य कर्ता लाई भन्नुहुन्थ्यो ।
उहाँको हरेक विचारमा पार्टी को दृष्टिकाेण, राजनीतिक लाईन नै लागु गर्नुहुन्थ्यो । उहाँलाई गाउँ घरका जनताले अन्यन्त साहसिलाे बन्दुक ,डर, तरासबाट नडराउने निडर स्वाभाव का रुपमा उहालाई चिन्ने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँकै याे स्वाभावले गर्दा अन्य पार्टीमा विचार राख्ने मानिसहरु समेत त्याे जनयुद्धताका अाफुहरु माअाेवादि का ज्याजति बाट सुरक्षित भएकाे महसुस गरेका थिए । म पनि त्याे समय गाउँकै विधालयमा अध्यनरत थिए,हामि भन्दा ठुला दाई दिदिहरुलाई लग्न माअाेवादि अाएपनि हेम पुनकाे कारणले नै लग्न सकेनन्। उहाँ अन्यत साहसिलाे,कसैकाे डरधम्की बाट नडराउने, अवसरबादिहरु संग निर्मम प्रकारले लडेर अघि बढ्ने ब्याक्क्ति हुनुहुन्थ्यो समाजमा हरेक ब्यक्ति संग घुलमिल हुनसक्ने समाजमा भएका हरेक समस्याहरु लाई सरल ढंगले समाधान गर्न सक्ने क्षमता उहाँमा थियाे । यी हेम पुनका स्वाभावहरु अाज पनि म सम्झिरहेकाे छु ।
उहाँको शाैक्षिक तथा राजनीति जिवन यात्रा बुझ्दा उहाँको प्राथामिक स्तरकाे अध्ययन गाउँकै भएकाे थियौं । कक्षा ४- ७ सम्मकाे अध्ययन र.ल नि.मा.वि गर्नु भएकाे थियौं भने२०४३ सालमा उहा मा.वि अध्ययन काे लागि महेन्द्र मा .वि वामिटक्सार गुल्मी मा भर्ना हुनुभयो । त्यो समयमा उहाँलाई अखिल (छैठौं ) ले लिएकाे विचार राम्रो लागेर उहा अखिल ( छैठौं ) काे सदस्यता लिई विद्यार्थी राजनीति काे यात्रा प्रारम्भ गर्नु भयाे। गाउँमा अाएर पनि अाफना गाउँले साथीहरू लाई संगठित गर्ने काम गर्नु भयाे। २०४५ सालमा उहाँले एस.एल.सि पास गर्नुभयाे त्याे समयमा देशमा पञ्न्चायति ब्यबस्थाले जनताहरुलाई दुख दिईरहेकाे थियाे उहाँ त्याे ब्यबस्था विरुद्ध लाग्नु भएकाे थियौं ।
देशमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना र पन्ञ्चायति व्यवस्था अन्यकाे लागि देशमा ठुलो अान्दोलन चलेकाे थियौं । उहाँ पनि त्याे अान्दोलनमा सहभागी भई बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नु भएकाे थियौं । त्यो समय पछि उहाँलाई घरबाट जागिर खानुपर्छ भन्ने तीब्र दबाव भएपछी उहाँले केही समय अाफनाे ईच्छा हुदानहुदै सालफेद प्रा .वि मा ६ महिना पढाउनु भयाे । त्यसपछि उहाँले जागिर छाेडेर ने.क.पा (मसाल) ले सन्चालन गरेकाे पार्टी शिविरमा भाग लिन जानुभयो उहाँले त्यहा तिन महिना सम्म प्रशिक्षण भाग लिएपछि उहाँमा थप बौद्धिक,शारीरिक ,मानसिक ,राजनीतिक रुपमा अाफुमा विकास भएको पाउनुभयो । पार्टी शिविर बाट फर्केपछि उहाँलाई संगठन मा नै काम गर्ने भावना जागृत भयाे र उहाँलाई थप अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावना उत्पन्न भयाे । उहाँमा घरकाे आर्थिक अवस्था नभए पनि पढ्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ उच्च शिक्षा अध्ययन लागि २०४९ सालमा सदरमुकाम बाग्लुङ्ग काे यात्रा तय गर्नुभयाे र उहाँ बाग्लुङ्ग क्याम्पसमा भर्ना हुनुभयो । राम्रोसँग अध्ययन गर्ने अभिलाषा भएपनि निश्चित ठाउँमा खान बस्नकाे लागि ठेगान भएन अावश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न उहाँलाई अन्यन्त गाह्रो भयाे । यी समस्याका बावजुद पनि उहाँले शाैक्षिक, राजनीतिक यात्रा निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउनु भयाे। विद्यार्थी राजनीति अगाडि बढाउदै उहाँले पार्टी दिएकाे हरेक जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयाे उहाँले त्यस प्रश्चात अखिल नेपाल युवक संघमा लामाे समय उहाँले जिल्लामा रहि अाफनाे जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयाे । २०५१ सालमा उहाँ धाैलागिरि क्षेत्रीय समितिमा रहि धाैलागिरि का युवाहरुलाई संगठित गर्दै उहाँ निरन्तर रुपमा संगठनमा त्रियाशिल हुदै अखिल नेपाल युवक संघकाे महामन्त्री काे जिम्मेवारी पाप्त गर्नुभयाे । हेम पुन पार्टी संगठनमा मेहनति, अनुशासित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ।
माक्र्सवाद,लेनिनवाद ,माअाेविचार धारा बाट लेस हुनु भएका काः हेम प्रसाद पुन सर्बहारा वर्गकाे राज्यसत्ता स्थापना गर्ने यात्रामा अविचलित रुपमा लाग्नु भयाे । पार्टीमा देखिने उग्रवामपन्थी ,दक्षिणपन्थी ,अराजकशैली र अवसरवाद का विरुद्ध निर्मम प्रकारले सम्झौताहिन संघर्ष गर्दै यात्राअगाडि बढाउनु भयाे । ने. क . पा (मसाल) ले अात्मसात गरेको विचारहरुलाई अगाडि बढाउनु भयाे । जनतालाई संगठित गर्दै नाैलाे जनवादी क्रान्ति काे अाधार स्तम्भ निर्माण गर्न मा निरन्तर रुपमा लाग्नु भयाे। अविचलित राजनीतिक यात्रामा लागिरहेको काः हेम प्रसाद पुनकाे स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थाल्यौं उहाँलाई काठमाडौंकाे माेडेल अस्पतालमा उपचार गराउन लगियाे । तर उपचारकाे त्रममा अल्सर राेगकाे कारण उहाँको मृत्युु २०६३ साल असाेज ७ गते हुन पुग्याे । उहाकाे मृत्युुले सिङ्गो देश,पार्टी संगठन ,उहाँको गाउँ समाज,परिवारलाई ठुलाे क्षति हुन पुगेको छ। हामीविच उहाँकाे भाैतिक शरिर नभएपनि उहाँको विचारहरु छन् साथै उहाँको निधनले कम्युनिष्ट अान्दोलनकाे लागि दुखद कुरा हाे । हेम प्रसाद पुन कम्युनिष्ट अान्दोलनकाे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो साथै समग्र परिवर्तनको अान्दोलनकाे लागि पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । पार्टी संगठनमा असल,ईमानदार , अनुशासित हुनुहुन्थ्यो उहाँका विचारहरु राम्रो ब्यावहारहरु हामिले पच्छाउन अावश्यक छ । अाज हामि उहाँको १४ अाैं स्मृति मा उहाँलाई सम्झिरहेका छाै उहाँले पार्टी ,क्रान्ति अान्दोलनमा पुर्‍याएकाे त्याग र याेगदान लाई सम्मान गर्दै उहाँले बाेकेकाे विचारहरुलाई अात्मसात गर्दै उहाँका विचारहरुलाई अगाडि बढाउन अावश्यक छ ।
-लेखक सराेजमान सिंह, सदस्य अखिल (छैठौं) केन्द्रीय समिति